Hong Kong : Ny Worker News Izay Namaky Bantsilana Ireo Anganongano Momba Ireo Mpitsoa-Ponenana No Nahazo Ny Loka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2017 4:47 GMT
Andro maneran-tany ho an'ny Mpitsoa-ponenana tamin'ny 2016. Sary avy amin'ny Worker News.
Azon'ilay andianà vaovao natolotry ny Worker News (mpiasan'ny vaovao) tamin'ny famakiana bantsilana ilay fiheverana fa “mpitsoa-ponenana sandoka” ireo mpitady fialokalofana any Hong Kong ny Lokan'ny Asa Fanaovana Gazety Mendrika Indrindra tamin'ny lokan'ny E-Citizen nokarakarain'ny vondron'ny olom-pirenena mpanao asa soa inmediahk.net sy ny Fikambanana Kolontsaina sy Fanabeazan'ny Haino Aman-jery mba hampiroboroboana ny tati-baovao tsy nalain-tàhaka, ny sariitatra ara-politika, ny lahatsary fanadihadiana ary ny sary amin'ny aterineto.
Ity manaraka ity ny tafatafa tamin'ny mpitati-baovao an-tsitrapon'ny Worker News notarihin'i Betty Lau ary navoaka tao amin'ny inmediahk.net tamin'ny 16 Desambra 2016. Naparitaky ny Global Voices ny dikany amin'ny teny anglisy noho ny fifanarahana fiarahana miasa.
Aingam-panahy avy tamina pejy Facebook izay nirakitra ilay fitokonana 40 andro nataon'ireo mpiasa mpibata entana tany Hong Kong tamin'ny 2013 izy io, nisy maromaro ireo mpanohana ilay fitokonana nanapakevitra ny hanokatra tranonkalam-baovao izay manome sehatra ho an'ny olontsotra. Avy eo ny Worker News, araka izay niantsoana azy, dia nanomboka niasa tamin'ny 2013.
Mpiasa an-tsitrapo dimy na enina no miandraikitra ilay haban-tranonkalam-baovao. Miasa fotoana feno ny ankamaroan'izy ireo, ary dia nanapakevitra ny hanome ny ampahafolon'ny karamany ry ,tamin'ny Jolay 2015, mba hanakaramana mpiasa miasa tapak'andro ho an'ny asa fanoratana ao amin'ilay haban-tranonkala.
Ankoatra ny fanaovana tatitra momba ny fepetran'ny asa ao an-toerana, dia mampahafantatra ireo vaovao mifandraika amin'ny zon'ny mpiasa any amin'ny faritra hafa manerana izao tontolo izao ihany koa ry zareo.
Andiana tantara anankidimy manakiana ny fiheverana, natosiky ny mpanao politika sy ireo haino aman-jery mpanome vaovao ao an-toerana, fa “mpitsoa-ponenana sandoka” ireo mpitady fialokalofana tonga any Hong Kong, no asa nahazoan-dry zareo ilay lokan'ny E-Citizen.
Momba ilay Fifanarahan'ny Firenena Mikambana manohitra ny fampijaliana, ny fanaovana habibiana, ny fanaovana tsinontsinona ny maha-olona na fanambaniana na fanasaziana ilay tantara voalohany. Tamin'ny taona lasa, nandrahona ny hiala tamin'ilay fifanarahana ilay Filoha Mpanatanteraka ao Hong Kong, Cy Leung mba hampitsaharana ny fidiran'ireo “mpitsoa-ponenana sandoka” tany. Setriny, niresadresaka tamin'ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ireo mpitati-baovaon'ny Worker News mba hanasongadinana fa io ny fanaovana toy izany dia mety hidika fa tsy voatery hametraka komity mahaleo tena hanadihady ny fanamparan-kery ataon'ny mpitandro filaminana ny governemantan'i Hong Kong.
Hazavain'ny tantara faharoa ilay fifandirana naharitra folo taona teo amin'ny raharaham-pitsarana momba ny tsy fahombiazan'ny governemantan'i Hong Kong tamin'ny fametrahana ilay rafitra tsy miangatra fitarainana noho ny fampijaliana amin'ny fizahàna ireo mpitady fialokalofana. Niafara tamin'ny fampiatoana ilay fampiharana fizahàna ireo mpitaraina ho nampijaliana ilay fifandirana tamin'ny Desambra 2009. Vokany, mpitady fialokalofana 6699 no mihitsoka ao Hong Kong miandry ny rafi-pitiliana vaovao. Tamin'ny volana Febroary 2014 vao nanomboka ny rafi-pitiliana iraisana hizahàna ireo mitaraina ho nampijaliana. Nahatratra 11364 no fitambaran'ny isan'ireo nitaraina ho nampijaliana.
Ny lahatsoratra fahatelo dia mandiso ireo fitarainana sandoka telo — voalohany, sandoka izy ireny ; faharoa tonga mba hankafy ny sakafo maimaimpoanan'i Hong Kong ry zareo ; ary fahatelo mpanao heloka bevava ry zareo — naelin'ireo mpanao politika sy ny haino aman-jery ao an-toerana momba ireo mpitsoa-ponenana.
Ny lahatsoratra fahaefatra dia manangona ireo fitakiana sandoka maro, ireo fahadisoan-kevitra sy fanehoankevitra manavakavaka momba ireo mpitady fialokalofana sy ireo mpitsoa-ponenana ataon'ireo haino aman-jery mahazatra ao an-toerana sy ireo mpanao politika mpomba an'i Beijing.
Ary ny tantara farany dia tantara-nà vehivavy mpitady fialokalofana iray avy any Jos, tanàna iray any Nizeria. Satria Kristiana izy, hoy izy, dia lasa lasibatry ny fanafihan'ireo silamo mpikatroka ao amin'ny faritra. Ho any Kanadà hitady fialokalofana no paikadiny, saingy voatànan'ireo tompon'andraikitra momba ny fifindràmonina any Hong Kong. Efa ho enina taona izao izy sy ny zanany anankitelo no mihitsoka ao Hong Kong.
Nohazavain'i Tam Kong ny antony nanarahan-dry zareo ilay tantara :
Tao anatin'ny taona vitsy, dia niroborobo ny fitsaratsaràm-poana ataon'ny fiarahamonina any Hong Kong ireo olona avy any amin'ny firenena hafa. Raha toa ka mpitsoa-ponenana ilay olona, dia heverin-dry zareo fa maloto sy tsy mahay na inona na inona, tonga mba hankafy ny sakafo maimaimpoana fotsiny ry zareo, mitondra korontana… izany fitsaratsaràm-poana tsy mitombina rehetra izany no aparitaka. Raha toa ka ny fampiasàna tantara diso tahaka izany amin'ny haino aman-jery no heverin'ny mpanao politika hahazoana tombony, dia andraikitray ny mampiseho amin'ny vahoaka ny sary tena marina.
Mpikambana roa ao amin'ny ekipan'ny gazety Worker News no nanolo-tena handinika ilay rafitra momba ny mpitsoa-ponenana any Hong Kong sy ny tantara, ary nampiasa torohay an-tsary ry zareo mba hanampiana ny mpamaky hahafantatra bebe kokoa ilay olana :
Mivoaka sy miditra an'i Hong Kong ireo mpitsoa-ponenana ao amin'ny tantara. Avy any amin'ny tanibe Shina ny ampahany be amin'ny mponin'i Hong Kong. Hong-Konge maro no voatery nifindra monina any amin'ny firenena hafa mba handositra ny korontana ara-politika [ andianà fifindràmonina faobe anankitelo no nisy taorian'ny fanambaran'i Deng Xiao Ping ny drafitra hanakambanana an'i Shina amin'i Hong Kong tamin'ny 1981, ny famoretana tao Tiananmen tamin'ny 1989 ary talohan'ny namerenana an'i Hong Kong ho an'i Shina tamin'ny 1997]… Mitovy ny antony manosika ireo olona izay mandositra an'i Hong Kong amin'ny làlana tsy ara-dalàna ambanin'ny tany Hong-Konge hifindra monina any amin'ny firenena hafa. Te-hiaina anatinà tontolo iray tony izy ireo.
Nolazain'ilay mpikambana iray hafa ao amin'ny ekipan'ny mpanao gazety, Ah Fei, fa fanamby ny faharetana rehefa haban-tranonkalam-baovao no resahana :
Tsy mora araka ny hiheveran'ny olona azy ny mitantana haino aman-jery amin'ny aterineto. Mitovy amin'ny an'ny haino aman-jery mahazatra ihany ny fitsipi-dalao. Rehefa tsy misy ny ho enti-manana hampiroboroboana ny sehatra sy tsy mamokatra tantara ampy ianao, dia hiafara amin'ny fahavitsian'ny mpitsidika ny haban-tranonkala izany.
Tsy noho ny isan'ny pejy voajery no antony manosika ireo mpiara-miasa ao amin'ny Worker News hanohy ny asany fa ny asa fanorenana fiarahamonina fototra izay ahafahan'ireo mpiasa mianatra sy mitarika ny hafa. Ho fanatanterahana izany dia namorona tambajotra fifampizaràna eo amin'ireo mpikarakara sendikà sy ONGs ry zareo mba hitarihana ireo tantarany vaovao av amin'izy ireo ho any amin'ny mpiasa sy ny olontsotra.